"Die Buitekamer" kwimbonakalo entle yaseStellenbosch
Indawo ezimeleyo enebhokisi yokutshixa. Igqibelele kula maxesha anemiqathango yeCovid esijongene nawo. I-Die Buitekamer ime kumbindi weentaba, amahlathi kunye nezidiliya. Idolophu encinci yeyunivesithi yaseStellenbosch yindawo entle kakhulu yokutyelela kwaye ikumgama ozi-3km ukusuka kuthi. Zonke iindwendwe zamkelekile ukuba zihlale kweli gumbi lokuphumla, elizolileyo nelipholileyo elinomnyango walo owahlukileyo. Yakhelwe ngaphantsi kweentaba ezintle zeStellenbosch kwaye ijikelezwe zizidiliya ezingabamelwane.
Sinegumbi elizimeleyo, elizolileyo, elipholileyo, elinevolumu ephindwe kabini elinegumbi lokuhlambela eline-en suite kunye nepatio encinci engaphandle ukuze uphumle kwaye uphumle. Inomnyango owahlukileyo ukuze ukwazi ukuza kwaye uhambe ngexesha lakho lokuphumla.
4.97 · Izimvo eziyi-309
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi309
Umoya omtsha wasentabeni. IParadyskloof yindawo ezolileyo nenobubele kwimizuzu emi-5 ukusuka kumbindi wedolophu. Ihlathi elinomtsalane kunye negadi yeediliya ihamba ebumelwaneni. Sisembindini wezinye iifama eziphezulu zewayini eNtshona Koloni. Sikumizuzu engama-20 ukusuka eStrand beachfront kunye nemizuzu engama-30 ukusuka eGordons Bay.
Iindwendwe zamkelekile ukuba ziqhagamshelane nam okanye umyeni wam uKlasie ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye imibuzo.